crepe စက္ကူ | လက်မှုပညာ လက်မှုပညာ On
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် crepe စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်သောလက်မှုပညာသုံးမျိုး. ဤလက်မှုပညာများသည် ကလေးများနှင့် အချိန်မရွေးပြုလုပ်ရန် ပြီးပြည့်စုံပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကို အလှဆင်နိုင်ပါသည်။
2 စက္ကူနှင့်ပြုလုပ်ရန် စိတ်ကူးနံပါတ် ၁- ကြာပန်း
3 စက္ကူစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ရန် စိတ်ကူးနံပါတ် 2- ချယ်ရီပန်းများ
4 crepe စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ရန်စိတ်ကူးနံပါတ် 3- Ballerina
crepe paper ကို တစ်ရှူးစက္ကူ crepe ဟုလည်းခေါ်သည်။ အလွန်ပေါ့ပါးသော စက္ကူသည် စွယ်စုံရရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကို အခြောက်၊ စိုစွတ်သော လိုင်းသေတ္တာများ သို့မဟုတ် အချို့သော အရာဝတ္ထုများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အချို့သော elasticity နှင့် ကျယ်ပြန့်သောအရောင်များပါရှိပြီး လက်မှုပညာအတွက် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
စက္ကူနှင့်ပြုလုပ်ရန် စိတ်ကူးနံပါတ် ၁- ကြာပန်း
ကြာပန်းသည် ပြုလုပ်ရန် အလွန်လွယ်ကူပြီး အလယ်အလတ်ပိုင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်း စသည်ဖြင့် အလှဆင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး ဒီလက်ရာကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်- လွယ်ကူသော crepe စက္ကူကြာပွင့်
စက္ကူစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ရန် စိတ်ကူးနံပါတ် 2- ချယ်ရီပန်းများ
ချယ်ရီပန်းများသည် ပန်းစည်းပြုလုပ်ရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက် အသေးစိတ်အချက်များအဖြစ် ပေးဆောင်ရန် သင့်တော်ပါသည်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး ဒီလက်ရာကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်- ရာသီဥတုကောင်းမွန်သောအိမ်ကိုအလှဆင်ရန်ချယ်ရီပန်းပွင့်သည်
crepe စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ရန်စိတ်ကူးနံပါတ် 3- Ballerina
Crepe စက္ကူသည် ဤ Ballerina's tutu ကဲ့သို့သော လက်မှုပညာအချို့အတွက် အဝတ်အစားပြုလုပ်ရန်လည်း သင့်တော်ပါသည်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး ဒီလက်ရာကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်- ယာဉ်ချောင်းနှင့်အတူ Ballerina
အဆင်သင့်။ ယခု သင်သည် ဤပစ္စည်းဖြင့် လက်မှုပညာကို စတင်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အခြားရွေးချယ်စရာများစွာကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ » စက္ကူလက်မှုပညာ » Crepe စက္ကူလက်မှုပညာ
နှလုံးသား သို့မဟုတ် နှလုံးသားပန်းကုံး